सहज बन्दै बैदेशीक रोजगार, कु’वेतले पनि सबै प्रकारका भिसा जारी गर्ने – List Khabar
Home / समाचार / सहज बन्दै बैदेशीक रोजगार, कु’वेतले पनि सबै प्रकारका भिसा जारी गर्ने
सहज बन्दै बैदेशीक रोजगार, कु’वेतले पनि सबै प्रकारका भिसा जारी गर्ने
admin November 9, 2021 समाचार Leaveacomment 54 Views
कुवेतले सबै प्रकारका भिसा जारी गर्ने तयारी गरे’को छ ।कोरोना सङ्क्रमण दर घट्दै जाँदा वर्क परमिटसँगै वर्किङ भिसा, बिजनेस भिसा, टुरिस्ट भिसा लगायत सबै प्रकारका भिसा जारी गर्ने तयारी गरेको कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको खबर कुवेत टाइम्सले लेखेको छ ।
तर कुवेतले मान्यता दिएका दुवै खोप लगाए’काहरूका लागि मात्र कुवेतले भिसाहरू जारी गर्ने सर्त राखेको छ । खोप लगाएको क्युआरकोड सहितको भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट भिसाको लागि अप्लाइ गर्दा पेस गर्न पर्नेछ ।
अन्य खोप लगाएकाहरूले भो बुस्टर डोज खोप लगा’एको हुन पर्नेछ । कुवेतले कोरोना महामारी रोकथामका लागि भन्दै नयाँ भिसा जारी गर्न रोकेको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण घट्दै जाँदा लगाएका प्रतिबन्धहरू पनि खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।
प्रदेश सभाको गाडी घर लगेर सचिवकी श्रीमतीले ठो’क्किएर बिग्रियो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले सर’कारी गाडीमा रजाइ गरेको पाइएको छ। सचिव धामीले सरकारी गाडी श्रीमतीलाई सिकाउन लगेको पाइ’एको हो।
सचिव धामीले दसैं विदाको सम’यमा महेन्द्रनगर घर गाडी लगेका थिए। उनले श्रीमतीलाई गाडी सिकाउदा उक्त गाडी ठोक्किएर बिग्रियो। गाडी बिग्रेपछि मर्मतका लागि १ ला’ख १६ हजार सरकारी रकम खर्च भएको छ। विदाको समयमा श्रीमतीलाई गाडी सिकाउदा गाडी ठोक्किएर मर्मत गर्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ।
मर्मत गर्दा लागेको खर्च प्रदेश सभाबाट भुक्तानी गर्न स्टिमेट उठा’इएको समेत बताइएको छ।
Previous भोलि कार्तिक २४ गते बुधबार ,कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
Next अब जौबाट नै मासु फालेपछि पशुवध गर्न नपर्ने !